Oge opupu ihe ubi abịala - ifelata ifelata | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Ihe na 04.02.2020 04.02.2020
Oge opupu ihe ubi abia - oge agwụla felata
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na ọ na-abụkarị n'oge opupu ihe ubi nke nwanyị (na ọtụtụ ụmụ nwoke) icheta na ịkwesịrị ịbelata! A jikọtara ọchịchọ a na anyanwụ na-enwu enwu, na-agbanwe akwa udu mmiri ka ọ dị mfe, na atụmanya oge igwu mmiri na-abịaru nso. Na nkenke, n'oge opupu ihe ubi nke ndị mmadụ na-amakụkarị ọchịchọ nke ịghara ibu. Ọ dị mma, ebe ọ kpuchitere, anyị agaghị egbochi ya. Kedu ihe achọrọ maka nke a?
Anọ "whales" nke oge opupu ihe ubi maka ịbelata ibu
Nke mbu, wepu ya ebe nile banyere ihe omuma banyere ibu di nfe na “kilogram ma di nfe - bepu kilogram asaa kwa izu”. O doro anya na kilogram ndị ahụ tụfuru ngwa ngwa, dịka nloghachi n’enweghị nsogbu, ọ dịghị mkpa ịbụ onye na-ahụ maka nri nri iji ghọta nke a.
Nke abuo, jikere maka eziokwu ahu bu na odi oke nkpa ị gha acho igosiputa ikike onwe gi. Ọ na - ada ụda na - agwụ ike, mana ụdị ihe a bụ eziokwu - iji nweta nsonaazụ dị njọ nke ị felata, ị nwere ike kpachara anya maka ihe ị rụzuru. Yabụ, anyị na-agbaso n'ụzọ nke ịdị nso maka iwelata ibu n'oge opupu ihe ubi. Ebe obu na anyị kpebiri - anyị agaghị ajụ ya!
Nke ato, odi nkpa ighota nke oma na nri nri riri nri adighi ezu oke. Gbalịa ịgụnye mmega ahụ. Jog (achọrọ akpụkpọ ụkwụ pụrụ iche!), Jiri ịnụ ọkụ n'obi jee ije na gị onwe gị na osisi maka Nordic ije, debanye aha maka ọdọ mmiri, yoga, Pilates, ma zụta dumbbell, n'ikpeazụ!
Nke anọ, ọ ga-adị mma ileta onye na-ahụ maka nri na-edozi ahụ. Mana ọ bụ ezie na ọpụrụiche ahụike a abụghị ihe a na-ahụkarị, ọ nwere ike ịkwụ nnukwu ego, ị ga-enyocha onwe gị nke ngwaahịa ị gbakwunye pound site na ya, nke ndị a na-ekwe nkwa na ị ga-efufu. N’ezie, na shuga na stachi ọ bụ ihe kwere nghọta, mana enwere ndị na -arịghị oke ọka, na enwere ndị na -arụ anụ.
Nyocha ahụmịhe gị na mpaghara a ma chee echiche maka nri gị maka opekata mpe ọnwa atọ. Ọ bụ ihe amamihe dị na ịmepụta menu nri ma rapara na ya.
Na mgbakwunye, enwere ụfọdụ aghụghọ ga - enyere gị aka n’ụzọ ị ga - eji wepụ mmefu.
Ihe aghụghọ ahụ abụghị nke osote, kama ọ bụ ụzọ iji felata
Tọ Ọtụtụ mmadụ ndị felataworo ma na-eburu ibu na-ekwu: ọ bụrụ na ị nwere ihe ụtọ naanị tupu elekere iri na abụọ nke ehihie, nke a anaghị emerụ ọnụọgụ ahụ. O di ka ndi dibia choputara nkowa maka ihe a. Ọ bụrụ na ịnweghị ike na-enweghị shuga, kedu ihe ị ga-eji nwaa ụdị ụtọ a?
Sweets ị nwere ike iri nri nke ịbelata
Nnu. Ewepu ya na nri. Kwere m, nke a abụghị ihe egwu dị ka ọ dị ka ọ dị, n'ihi na ngwaahịa niile nwere sodium chlorine n'ọtụtụ dị iche iche, ụfọdụ dị ọtụtụ. Dịka ọmụmaatụ, soy sauce bụ ngwaahịa nwere ọtụtụ nnu, na-ete ya (ya na mmanụ oririsalad inine, ichoro nma. Site n'ụzọ, ịhapụ ịgbakwunye nri, ị ga-eju gị anya na ọtụtụ ngwaahịa dị nnu. Dịka ọmụmaatụ, nkochi ime akwa nwere nnu nnu n'onwe ya, ị nwere ike iche n'echiche. Ibe okpueze, mana ọ ga - enyere gị aka ifelata!
Ofe Ntinye nke ofe ofe akwukwo nri n’ime nri dị mma maka mgbaze, mana ọtụtụ na-arụ ụka na nri ofe nwere ihe oriri dị na celery na-enyere aka ịbelata oke. Ọbụna Marlene Dietrich, onye na-abụghị nanị Hollywood ihe ndina, kamakwa onye nnabata ọfụma, kwuru nke a. Na-agụ slimming ofe Ezi ntụziaka. Njikere ịnwale ya?
Oyi na-egbu egbu na slimming soups
Psychology N’ezie onye ọ bụla n’ime anyị maara okwu ahụ “dọrọ onwe anyị.” Ọ na-enyo na ị nwere ike ịme ya n'ezie nye onwe gị - nke a ga - enyere aka ịtọlite ​​onwe gị maka ịbelata oke ibu n'oge opupu ihe ubi.
Ka e were ya na ịchọrọ iri nri, mana ọbụghị naanị, mana ihe ekwesịghị ịdị na nri gị. Jiri nwayọ mechie ọkpọ gị, na ... nke a bụ ihe ijuanya, mana ọ ga - enyere gị aka ikpebisi ike ịga n’ihu n’ụzọ ị felata.
Ma na… Anyị amatala ọtụtụ ihe banyere ile anya ụfọdụ agụụ. Ọ ga-adị mma ka ị were anya nke uche gị hụ ihe ị rọrọ.
Ọ dị mma, ị dịla njikere ifelata na oge opupu ihe ubi?
You dịla njikere ifelata n’oge opupu ihe ubi?
Ihe na Idozi mgbazi
Ajuju 22 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,342.